YoYarLay - သုတစုံ
စိတ်အစဉ်ငြိမ်သက်သွားဖို့ အချိန်တစ်ခုတော့ လိုပါတယ်
တစ်ခါတုန်းက မြတ်စွာဘုရားရှင်က နောက်လိုက်တပည့်သား ရဟန်းတွေနဲ့အတူ တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ကို လမ်းလျှောက်ပြီး ကြွမြန်းခဲ့ပါတယ်။ လမ်းခရီးတစ်နေရာ ရောက်တဲ့အခါ
သင့်ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အပြုအမူဆိုးများ
မိဘဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်၊ စွမ်းရည်၊ အရာအားလုံးနီးပါးကို မိဘဆီကနေ သင်ယူကြတာပါ။
အရက်သောက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား တတ်မြောက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူစေ
လူအတော်တော်များများဟာ အရက်သောက်ပြီးတဲ့အချိန် နိုင်ငံခြားဘာသာ စကားလုံးတွေကို မိခင်ဘာသာစကားကြားထဲမှာ အရင်ထက် ပိုညှပ်ညှပ်ပြီး ထည့်ပြောလေ့ရှိကြတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကဏ္ဍ (၂၉-၇-၂၀၁၈ မှ ၄-၈-၂၀၁၈ အထိ)
ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေအတွက် ဆရာ ကင်္ကသူရဲ့ စန္ဒသူရိယ နက္ခတ္တဝေဒ ဟောစာတမ်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မားစ်ဂြိုလ်ရဲ့ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ၁၂.၅ မိုင်ကျယ်တဲ့ ရေကန် တွေ့ရှိ
ဥရောပ အာကာသအေဂျင်စီက သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မားစ်ဂြိုလ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်တာကတော့ မားစ်ဂြိုလ်ရဲ့ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနားမှာ ၁၂.၅ မိုင်ကျယ်တဲ့ ရေကန်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အောက်ဘက်မှာ ရေခဲအလွှာဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းကလည်း နာဆာဟာ အင်္ဂါဂြိုလ်ရဲ့ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်စဉ်မှာ ရေခဲအလွှာကို တွေ့ရှိခဲ့ဖူးသလို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာလည်း နာဆာရဲ့ မားစ်ဂြိုလ်ပတ်လမ်းကို လေ့လာသူတွေဟာ ဂြိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်ချိန်မှာ ရေခဲအလွှာတွေ ရှိနေတဲ့ ကုန်းမြင့်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မားစ်ဂြိုလ်ရဲ့ မြေဆီလွှာမှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်၊ ကယ်လ်ဆီယမ် တွေ ပါဝင်နေတာပါ။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာတော့ ပင်လယ်ရေ အပူချိန်ဟာ ၂၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (အနှုတ် ၂ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ်) ရှိပြီး အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်မှာတော့ အနှုတ် ၁၀၃ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် (အနှုတ် ၇၅ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်) ရှိနေပါတယ်။
Ref: "Scientists DiscoveredaLiquid Lake on Mars. Could That Mean Life?"
Moon (လ) ဟာလည်းပဲ ငလျင်လှုပ်နိုင်ကြောင်း
ကမ္ဘာတစ်မျိုးတည်းကသာ ငလျင်လှုပ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လ (Moon) အပါအဝင် အာကာသဗိမာန် ထဲက ဘယ်အရာမဆို သင့်တော်တဲ့ အားအခြေအနေ တစ်ခုနဲ့ ဆိုရင် လှုပ်ခါနိုင်ပါတယ်။ လရဲ့ လှုပ်ခါမှု (လငလျင် moonquake) ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဂြိုလ်နဲ့ အနည်းငယ်ကွာခြားပြီး ထူးဆန်းစွာ ကြမ်းတမ်းပါတယ်။
ပလတ်စတစ်သွားပွတ်တံတွေနေရာမှာ အစားထိုးသုံးနိုင်မယ့် ဝါးသွားပွတ်တံတွေ
ပလတ်စတစ်ဖျော်ရည်ပိုက်တွေ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေကြပေမဲ့ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေရတဲ့ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သွားပွတ်တံအကြောင်း စဉ်းစားမိသူကတော့ ခရစ္စတီးနားရာမီရက်ဇ် (Christina Ramirez) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူလိမ် လူကောက်များ (မိန်းကလေးများသတိပြုနိုင်စေဖို့)
ကျွန်မတို့နယ်မြို့က ဈေးလေးထဲမှာ ဟိုဝယ် ဒီဝယ်လုပ် ပြီးတော့ အလုပ်ကိစ္စလေးတစ်ခု ချိန်းထားတာက ရှိနေပြန်တယ်..အချိန်ကလည်း တစ်နာရီလောက်လိုသေးတာမို့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးနဲ့ ရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်မိခဲ့တာက ဘဝတစ်သက်လုံး မမေ့နိုင်တဲ့
ခရီးသွားရင်း အလုပ်လုပ်ပြီး ဝင်ငွေရှာကြမယ်
ခရီးသွားဖို့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးလိုတယ်ဆိုပေမဲ့ စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မရှိဘဲနဲ့လည်း ကမ္ဘာပတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သင်သိပြီးပါပြီလား...
အကြောင်းအရာ တိကျခိုင်မာမှ သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်ပါ
အိမ်ထောင်သက်တမ်း မကြာသေးတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သာယာလှပတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ လင်မယားနှစ်ယောက် မနက်စာစားနေတုန်း
အပတ်စဉ် စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍကနေ ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ အခုတလောဖတ်ဖြစ်နေတာလေးတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ ဘာသာပြန်စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်ကို ရိုးရာလေးပရိသတ်အတွက် ပြန်ပြီး ညွှန်းပေးလိုက်ပါရစေ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာနဲ့ အပြင်မှာ လူတွေက သင့်ကို အမြင်မကပ်သွားစေဖို့
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ကိုယ့်ကို အမြင်ကပ်အောင်လုပ်ဖို့က သိပ်မခက်ခဲလှပါဘူး။ အမူအရာပိုလွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေလွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဥပမာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတတ်လွန်းတာကြောင့် လူတွေရဲ့မျက်မုန်းကျိုးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။
သင်က ခရီးသွားတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ မင်းကွန်းရွာဆီကိုလဲ ဘုရားဖူးသွားသင့်ပါတယ်။ မင်းကွန်းရွာဟာ မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ တည်ရှိတဲ့ရွာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့မှာနေရတာမွန်းကျပ်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ထွက်ပေါက်နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်စေမှာပါ။
ချစ်သူဟောင်းနဲ့ ပြန်တွဲသင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
လူတိုင်း အမှားနဲ့ မကင်းသလို လူတွေမှာ အားနည်းချက် ကိုယ်စီတော့ရှိကြပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက စာကျက်တာဟာ ကမ္ဘာကြီးလောက် ပြသာနာဖြစ်ချင်ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။